Fahrenheit 451, ọrụ nke Ray Bradbury ga-eme ka ị revalue akwụkwọ | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
John Ortiz | | Akụkọ ndụ, akụkọ sayensị emeghị eme, ụdịdị, Akwụkwọ, Novela
"Ebe ọ bụ na ịgụ akwụkwọ na-egbochi inwe obi ụtọ na mba Montag, ị ga-enwe ọ beụ site n'ike ..." ahịrị ahụ dị na azụ azụ nke 451 Fahrenheit O zuru oke okpokoro dystopia nke Ray Bradbury kere. Ọ bụ akụkọ jupụtara na ọnọdụ ndị jọgburu onwe ha, nke na-anọchite anya ọhụụ nke ọdịnihu ga-adịkarị obere akụkọ kwa ụbọchị. Ọ pụtara, yabụ, ịdọ aka na ntị doro anya banyere ịbawanye "ọdịnaya maka ndị nzuzu".
Onye dere akwukwo kowara mba ebe obi uto abughi ebe obi di, o kariri ya bu ihe etinyebere na uche flimsy site na telivishọn, tumadi. Ya mere, amachibidoro ịgụ akwụkwọ kpam kpam. Nghọta, inye echiche na ịhazi ụkpụrụ gị bụ omume adịghị anabata nke a ga-ekpochapụ ozugbo enwere ike iji zere mgbasa nke omume a dị egwu. Ọ bụ otu n'ime ọrụ kachasị mma nke Ray Bradbury weere na sinima.
2 Fahrenheit 451 Nchịkọta
2.1 Ndị ọkụ na Guy Montag
2.2 Ike nke Akwụkwọ na Clarisse McClellan
2.3 Ọnwụ na-atụghị anya ya, ọnwụ abụọ na-awụ akpata oyi n'ahụ na mgbanwe na-atụghị anya ya
2.4 Na edemede
2.6 Ntughari na-atụghị anya ya
2.7 Montag, onye gbara ọsọ ndụ, na ndị nnupụisi ahụ
2.8 Ersonbụ maka udo
2.9 Mwakpo ahụ megide ndị nnupụisi
3 Wa nke ọrụ
3.1 Akwụkwọ bụ ike, onye na - ebute akwụkwọ ga-ebibi ya ma ọ chọọ ịchị
3.2 Mmetụta TV mgbe Agha IIwa nke Abụọ gasịrị
3.3 Achịcha na Circus
Ọ bụ Ray Bradbury A mụrụ ya na Waukegan, Illinois, United States, na August 22, 1920. N'oge ọ bụ nwata na oge uto ya ọ na-adịkarị nrọ ọjọọ, agbanyeghị, o jiri ọtụtụ n'ime ihe onyonyo ndị ahụ egwu mee ihe na ọrụ ndị ọ mechara mee. Nnukwu ndakpọ ahụ mere ka ezinụlọ ya kwaga Los Angeles, ebe ọ gụsịrị akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ sekọndrị.
N'agbanyeghị na ị naghị aga n'ihu n'ọmụmụ ihe, na 1943 a maara ya dị ka onye edemede ọkachamara n'ihi nnọgidesi ike ya na ọrụ ahụ na ikike ịkụziri onwe ya dị ịtụnanya. Afọ nke iri ise ga-abụ oge nke nmeju-aka mgbe ebipụtara nke Martian Ihe E Mere (1950), Ihe atụ nwoke (1951) na 451 Fahrenheit (1953), aha ndi akuko edemede edemede.
Bradbury batara na ụwa nke uri, yana ide edemede na edemede maka telivishọn. Isi okwu nke ọrụ ya kachasị bụrụ nke ọhụụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile metụtara ajụjụ gbasara ọdịbendị nke mba ndị mepere emepe, ọchịchị aka ike, mmachi, agha atomiki, fasizim na ịdabere na teknụzụ.
Stylekpụrụ ya gwakọtara echiche efu n'ụzọ pụrụ iche, egwu, uri na okwu nzuzu. N'otu aka ahụ, omume nnupụisi megide mmegbu bụ isiokwu mgbe niile yana egwu ọnwụ ma ọ bụ ọnọdụ ha ekweghị ibe nọrọ n'ebe ịkpa oke agbụrụ na ịkpa oke agbụrụ nọ. Ray Bradbury nwụrụ na July 5, 1912.
Fahrenheit 451 Nchịkọta
“E nwere ịda jụụ gbakọrọ n'ọkụ ahụ na ịgbachi nkịtị dị na ihu ụmụ nwoke ahụ, oge ahụ nọkwa ebe ahụ, ogologo oge zuru ezu ịnọdụ n'akụkụ ụzọ mịkpụ n'okpuru osisi, yana ụwa ma jiri anya gị tụgharịa iberibe ígwè ndị ikom ahụ na-akpụ na-arapara n’etiti ọkụ. Ọ bụghị naanị ọkụ nke dị iche. Otu a ka ịgbachi nkịtị bụ. Montag kwagara n'ime ịgbachi nkịtị ahụ, metụtara ihe niile n'ụwa. "
Ndị ọkụ na Guy Montag
"Ọ dị mma ịsụ ọkụ." 451 Fahrenheit na-ezo aka ogo nke okpomọkụ nke akwụkwọ na ederede na-ere ọkụ. Guy Montag, onye mbu, nwekwara nọmba 451 zọọ na okpu ọkụ ya. Ọ bụ ezie na ọrụ ha abụghị imenyụ ọkụ, n'ụzọ megidere ya, ọ bụ ime ka ha daa mbibi.
Bradbury na-ewebata nnabata nke America ọdịnihu, ebe ndị ọrụ ọkụ anaghị ebunye ihe mmenyụ ọkụ, ha na-ebu ndị na-ebu ọkụ. Otu echiche bụ eziokwu (nke imirikiti ọnụ ọgụgụ mmadụ nabatara) dị mkpa maka udo nke obodo. Montag nwere afọ ojuju na nke a, ruo n'ókè nke na ọ na-enwe obi ụtọ n'ọrụ ya.
Ike nke Akwụkwọ na Clarisse McClellan
"Knoẁ maara ihe mere akwụkwọ ndị dị ka nke a ji dị mkpa? N'ihi na ha nwere mma. Oleekwa ihe okwu a pụtara? Maka m, ọ pụtara udidi. Akwụkwọ a nwere pores, ọ nwere atụmatụ. Enwere ike itinye akwụkwọ a n'okpuru microscope. Site na oghere ọ ga - achọta ndụ, ihe ndị gara aga na njedebe na - enweghị ngwụcha. Pore ​​pore, ka edere ihe edere banyere ndụ ị nwere ike ị nweta site na mpempe akwụkwọ ọ bụla, ka ọ na - ese "edemede". Otu osila dị, nke ahụ bụ nkọwa m. Na-ekpughe ihe zuru ezu. Na-adịbeghị anya zuru ezu. Ezigbo ndị na-ese ihe na-emetụ ndụ mgbe niile. Iodị mediocre na-eji ọsọ ọsọ aka ha n'elu ya. Ndị ọjọọ ahụ dinara n'ike ma hapụ ya dị ka onye na-abaghị uru.
Yoù ghọtara ugbu a, ihe mere e ji kpọọ akwụkwọ asị ma na-atụ ya ụjọ? Ha na-egosipụta oghere nke ihu ndụ. Ndị Comfy na-achọ ihu ihu ọnwa zuru oke, enweghị pores, enweghị ntutu, enweghị nkwupụta ”.
Ọ bụ Ray Bradbury.
Ọ bụ akụkụ nke otu ndị agha - ụdị Cuban G2 - iji kpochapụ akwụkwọ, ebe a na-ahụta ha dị ka isi iyi nke ọgba aghara na ọgba aghara.. Ruo mgbe Clarisse McClellan pụtara, nwa agbọghọ dị afọ iri na asaa nwere obi ụtọ banyere okike na afọ ojuju na ọnọdụ nke gburugburu ya. Ọ na-agha “nsogbu nke ụbụrụ” na ụbụrụ Guy, nke na - eto nke ọtụtụ ihe nsogbu na - eme.
Ọnwụ na-atụghị anya ya, ọnwụ abụọ na-awụ akpata oyi n'ahụ na mgbanwe na-atụghị anya ya
Nke mbụ, Mildred, nwunye ya na-anwa igbu onwe ya site na ị aụ ọtụtụ ọgwụ ụra. Mgbe e mesịrị, ọ nụrụ banyere otu agadi nwanyị nke zoro akwụkwọ ma chọọ ka a kpọọ ya na akwụkwọ ya ọkụ. Na mmechi, ihe mberede nke mberede nke Clarisse tinyere Montag n'ime nkpagbu miri emi ... mgbe onwu nile gasiri, akwukwo ndi ezuru ezu na nke zoro ezo buzi nkasi obi ya.
Ozugbo Guy malitere ịgụ na nzuzo, ọ gaghị eche otu ụzọ ahụ ọzọ. Ajuju banyere ogige nke ndi mmadue chere na ha nwere obi uto n'okpuru ochichi New Order na-adi karie. Brainwashing (nke na-adịgide adịgide na nke na-adịgide adịgide na telivishọn) abaghịzi uru.
Mgbe Montag anọghị ọrụ, Beatty, bụ́ onye ntụzi ọrụ nke ngalaba mgbanyụ ọkụ, na-aga eleta ya n’ụlọ ya ma kenye ya awa 24 iji nyochaa akwụkwọ ndị o zuru. iji chọpụta ma ọ bụrụ na ha nwere ọdịnaya ọ bụla nke mmasị. Emechaa ụbọchị a, Guy ga-ebunye akwụkwọ ndị ahụ ma gbaa ha ọkụ. Ọgụgụ ahụ karịrị akarị, ya mere Montag na-achọ enyemaka nke onye otu ọlụlụ ya bụ Faber.
Ntughari na-atụghị anya ya
N’ezie, Beatty lere akwụkwọ anya. O kwenyere na ihe odide ndị ahụ na-emerụ ahụ ma na-emerụ ahụ, kwesịrị ka e bibie ya. Ka ọ dị ugbu a, a na - eme mkpọtụ site n'ụlọ Montag, Mildred gbapụrụ na tagzi ... nwunye ya arara ya nye. Mgbe ahụ, onyeisi ọkụ ahụ gosipụtara na ebe ahụ wee rịọ ka Guy gbaa ụlọ ya ọkụ na akwụkwọ ndị ahụ.
E jidere Montag na ebe ahụ mgbe ọ na-abara ịba mba ọjọọ na Beatty, ruo na Guy na-agbapụ onye na-ere ọkụ ya, na-eme ka onye ka ibe ya ọkụ, ma na-akụ ndị otu egwuregwu ya tupu ha agbapụ. Mkpagbu na-a televised ihe omume. Agbanyeghị, Montag jisiri ike iwepụ nnụnụ sniffer site n'inye akwa Faber wee sikwa n'akụkụ osimiri gafee.
Montag, onye gbara ọsọ ndụ, na ndị nnupụisi ahụ
Onye na-agba ọsọ ndụ Montag na-abịa n'okporo ụzọ ụgbọ oloko agbahapụ. N'ebe ahụ, ọ na - enweta "ndị akwụkwọ", otu ìgwè ndị ọgụgụ isi na-enupụ isi nke Granger na-edu. Ha bụ otu ụdị nke okpuru na-agbachitere akwụkwọ e nyefere maka iburu n'isi nnukwu ọrụ nke mmadụ.
Ersonbụ maka udo
Iwu Ọhụrụ ga-edobe anya. Na nnọchi mbubreyo Montag, ndị uwe ojii na-egosi na onyoonyo nwude onye ogbenye dị njọ nke edeburu akwụkwọ na sistemụ ahụ. N'oge ahụ, Montag mechara ghọta agha nke dị na ndò dị n'etiti ike siri ike na ndị na-agbachitere nnwere onwe nke ozi.
Mwakpo ahụ megide ndị nnupụisi
Ozugbo etinyere ya na otu a, enyere Guy ka o buru akwukwo nke Ekliziastis n'isi. Na mberede, Iwu Ọhụrụ kpebiri ịtụba obodo ahụ na ebumnuche nke ibibi ndị nnupụisi ahụ n'agbanyeghị agbanyeghị puku puku ndị aka ha dị ọcha nwụrụ. Na njedebe, Montag tinyere ndị ọrụ ibe ya na-achọ ndị lanarịrị n'etiti mkpọmkpọ ebe iji malite iwughachi mmepeanya.
Wa nke ọrụ
Akwụkwọ bụ ike, onye na - ebute akwụkwọ ga-ebibi ya ma ọ chọọ ịchị
451 Fahrenheit ọ na-alaghachi, na-ama ụma, n'ọchịchịrị gbara ọchịchịrị enwerela na Gris mgbe mwakpo nke ndị Dorians na mbibi nke ihe ederede niile na ọnwụ nke ndị odeakwụkwọ ha na narị afọ nke iri. ka. C.; n’otu aka ahụ, ọ na-eme ka onye na-agụ ya laghachị azụ n’oge a na-agba Ọbá akwụkwọ Aleksandria ume inye ụzọ nke 2003 narị afọ tupu a mụọ Kraịst. C., ma ọ bụ narị afọ nke ugbu a na ịpụnara ndị mmadụ ihe na ihe mbibi nke ihe mgbe ochie na Iraq n'oge mwakpo XNUMX.
Akwụkwọ ahụ na-eduga anyị na ọdachi ọ bụla nwere ike igosi njedebe nke nka na-akwado ọdịda nke echiche dị oke egwu. Gba ohu anaghị achọ karịa nke ahụ: iji mechie obi site n'ike.
Mmetụta TV mgbe Agha IIwa nke Abụọ gasịrị
Mgbe Agha Worldwa nke Abụọ gasịrị, iwughachi mba ndị mepere emepe wetara mgbasawanye nke ihe nkiri telivishọn. Ma ọ bụ mmadụ ole na ole ji ịdọ aka ná ntị nke ọtụtụ ndị maara ihe kpọrọ ihe banyere ịdalata àgwà ịgụ ihe iji mebie telivishọn. Ihe ọzọ bụ na ọ bụ ihe dị ike iji gbasaa ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ agụmakwụkwọ na-adịkarị elu na ụwa mbụ na mba ndị na-emepe emepe, Mmalite nke "igbe nzuzu" dị ka ihe dị mkpa n'ụlọ na-eme ka ọdịdị nke "ndị na-agụghị akwụkwọ na-arụ ọrụ" na-aga n'ihu. Nke ahụ bụ ịsị, ọ malitere site n'inwe ndị na-eche echiche ka ha nwee mmadụ ndị na-enweghị nghọta ọgụgụ, enweghị ike ime nyocha miri emi banyere gburugburu ebe obibi ha, ọ dị mfe ịchịkwa ma chịkwaa.
Quote nke Ray Bradbury kwuru.
Achịcha na Circus
Atụmatụ "achịcha na circus" nwere ike ịdị ka Alaeze Ukwu Rom, mana ha alabeghị kpamkpam n'ụwa. N'ọkara nke abụọ nke narị afọ nke iri abụọ, ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị gburugburu ụwa jiri telivishọn mee ihe dị ukwuu ma ọ bụ nke pere mpe iji kpuchie echiche nke ndị mmadụ, kwado ozi gọọmentị ma mee ka onwe ha dị ike. Ọmụma amaghị nke a na-akọ na amaghị ihe na-adabaghị adaba bụ ihe juru ebe niile taa.
Ihe echiche zuru ezu na 451 Fahrenheit o nwere ebighi ebi ebighi ebi: ihe omuma bu ike. Ọ bụrụ na n'oge edere akwụkwọ a, otu n'ime ihe ndị na-akpali akpali bụ ọdịdị nke telivishọn dị ka ngwa ụlọ dị mkpa, gịnị ga-abụ echiche onye edemede na ọnọdụ dijitalụ dị ugbu a eziokwu na-egosi, ozi ọma, vidiyo nzuzu na-aga ịgha ma na-ezighi ezi na mgbasa ozi mgbasa ozi?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » 451 Fahrenheit
Oke Akụkọ banyere ha iji mee ememme Afọ Ọhụrụ ndị China